Star Trek Bluetooth Kutaurirana, kurota kwechero Treki | IPhone nhau
Muma 90s uye kutanga kwezana rino ramakore, nharembozha dzaive mufashoni ndidzo dzataiziva kuti "V". Iwo mamodheru aimbove madiki sezvaaipeta mukati mawo, aive nehunyanzvi dhizaini uye Iwo aive akavakirwa pamutauriri akashandiswa naKapteni Kirk, Spock nedzimwe nhengo dzeStar Trek. Zvino, angangoita makumi maviri emakore gare gare, tichakwanisa kushandisa chishandiso chekutanga, chaiko, fananidzo yechigadzirwa chepakutanga, kunyangwe ichizofanira kumirira kusvika Ndira wegore rinouya.
Haizove chando chinotonhorera pamusika, handiti. Tese tine foni yekubata, ichokwadiwo. Chaizvoizvo izvo, uye kana iwe uri fan pamwe nemari yekusiya, iyo Star Trek Bluetooth Kutaurirana inogona kukupa iyo poindi yekusarudzika iwe wanga uchitsvaga.
Sekureva kweWand Company, uyu anotaurisa ”Iyo ine mitsara yese uye makakombama echigadzirwa chekutanga. Iwe haugone kufona wega, asi izvi zvichaita nekubatana neema smartphones uye zvinokutendera iwe kupindura mafoni nekungovhura iyo antenna. Uye zvakare, ichasanganisira bracket ine magnetic grip kuti igare yakachengeteka munzvimbo. Inogona zvakare kubhadhariswa zvisina waya, saka inogara ichibhadhariswa uye yakagadzirira kushandisa".
Pamusoro pezvese zvataurwa, iyi Star Trek yekutaurirana Ichaburitsa ruzha rwakawanda kubva kune yakateerana nhevedzano uye inogona zvakare kushandiswa seyebluetooth mutauri kuteerera mimhanzi, iyo inogona kushandiswa kutamba raibhurari yedu, Apple Music kana Spotify.
Iyo Star Trek Bluetooth Kutaurirana yave kuwanikwa pre-odha pane yayo yepamutemo webhusaiti, asi haizotanga kutumira kusvika gore rinouya. Mutengo waro hauna kukodzera munhu wese; Yayo $ 149,95 ichazongokosheswa neavo vanonyanya, vateveri veStar Trek.
Une rumwe ruzivo uye unogona kuchengetedza mudziyo uyu mu Star Trek Bluetooth Kutaurirana peji yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Star Trek Bluetooth Kutaurirana, kurota kwechero Treki
Oo Mwari wangu, chishamiso ...
OMG !! Ndiri kuda chimwe cheichi !!